Ihi ụra obere nwatakịrị - ederede na ederede iji bipụta
Ihi ụra obere nwa - ederede na ederede
Ihi ụra obere obere ederede
Nyocha nke ụmụ egwu bụ ezigbo enyemaka ehi ụra. Mmetụta, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-esi na eziokwu ahụ bụ na ụmụaka na-ahụ egwu egwu. Ọbụna nkowa zuru ezu banyere isiokwu nke ịda ụra nke ọma na-egosi na ụmụaka na-abanyekwuo ike site na egwu.
Ihe ndetu na edere ụra obere nwa na-ehi ụra
Ndị nne na nna ekwesịghị ịghọ ndị ọkachamara iji mee ka ụmụ ha mara banyere ọtụtụ uru nke oge ntụrụndụ mgbe ha na-ehi ụra. Ma ijide n'aka na pitch ahụ dịka ọ dịkarịa ka ọ dị mma, ọ na-amasị gị ịpịpụta template na-emetụtara nwa anyị na-eji ederede na ederede nke akwụkwọ ntụrụndụ. Ụmụ buru ibu nwekwara ike igbanye epupụta na ndetu na ederede!
Ụra, nwa, ụra!
Nna na-echebe atụrụ ahụ,
nne na-agbaji ya Bäumelein,
ọ dara nrọ.
Na mbara igwe na-aga atụrụ ':
Igwe ole na ole bụ ụmụ atụrụ,
ọnwa, ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ ahụ.
N'ihi ya, ana m enye gị atụrụ
mma na mgbịrịgba ọlaedo,
nke a ga-abụ enyi gị na-egwu egwu.
unu atula egwu, dika aturu:
Ma ọ bụghị ya, nkịta ọzụzụ atụrụ ga-abịa
ma na-ata nwa m ọjọọ.
Noten von Kinderlied Schlaf Ụra nke ụtụtụ Na-emeghe dịka faịlụ dị egwu
Obere edemede na ederede
Achị na olulu - egwu egwu na ederede
Ana m eji oriọna m - ederede na ederede